Cudurka Ebola oo Liberia laga sifeeyay - BBC Somali
Cudurka Ebola oo Liberia laga sifeeyay
9 Maajo 2015
Image caption Liberia muddo laguma arkin qof cudurka qaba
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa la filaayaa inuu ku dhawaaqo in cudurka Ebola laga dabar gooyay dalka Liberia, kaddib markii dalkaasi aan kiis cusub lagu arkin 42 maalin.
Cudurka Ebola eek u dhuftay qaar ka mid ah dalalka Galbeedka Afrika, waxaa u dhimatay in kabadan 11 kun oo qof, welina waxa uu fara ba’an ku haayaa dalalka Guinea iyo Sierra Leone.
WHO ayaa wajeheysa eedeymo la xiriira inay iska indhatirtay digniinihii la xiriiray Ebola, iyo in si gaabis ah ay uga jawaabtay.
Bishii September ee sanadkii hore, gudaha dalka Liberia waxaa isbuucii lagu arki jiray 400 oo kiis oo cusub, cibitaalada ayaa buux dhaafay, jidadkana waxaa lagu arkayay maydad.
Balse, kaddib wax dadka qaar ay ku sheegayaan halis jawaab gaaban laga bixiyay waxay u muuqataan in Liberia laga saaray Ebola.
Haddii sida la filaayo aan maanta kiis cusub laga soo sheegin Liberia, waxay noqoneysaa inaan 42 maalin aan la arko qof qaba xanuunka, waana laba jibbaarka muddada lagu ogaado xanuunka. Si rasmi ah ayaana loogu dhawaqaayaa in Ebola uusan ka jirin Liberia.
Laakiin WHO waxa ay sheegeysaa in aysan weli jiran xaalad lagu nasto. Ebola waxa uu weli ka jiraan dalalka Liberia deriska la ah ee Guinea iyo Sierra Leone.
Si degdeg ahna loogama soo kaban karo xaaladdii xumeyd ee Ebola. In kabadan 4,600 oo qof oo Liberia u dhashay ayaa Ebola u dhimatay, caruur badan ayaa agoonnoqday, maalgashadayaashana cudurka ayey ka baqayaan, taas oo dhaawacday dhaqaalaha aan cagaha adag ku taagneen ee Liberia.